Dharka qaboojiyaha lo Dharka qolalka qabow • Dawaarka kumbuyuutarka P&M
isugeyn qaboojiyaha waa dhar u heellan ka shaqeynta xaaladaha heer kulku hoos ugu dhaco -40 digrii C. Kuwaani waa badeecooyin tayo sare leh, oo si taxaddar leh loogu tolay, kuwaas oo horeyba isugu caddeeyay shirkado badan. Ku qanacsanaanta shaqadooda, waxaa doorta macaamiisha dalal kala duwan ka yimid. Badanaa waxaa lagu iibsadaa isku dhafan kabaha iyo galoofyada. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa nigiska kuleylka kuleylka lehkaas oo si fiican u buuxin doona ka-hortagga jirka ee heerkulka hooseeya.
Coldstore CS-12 dukaanka qabow guud ahaan
Dhar qaboojiye xirfadle ah oo wata shahaadooyin
At pm.com.pl, waxaan ku siineynaa qaboojiyaha xirfadleyda ah iyo dharka guud ee dukaanka qabow, kuwaas oo lagu kala sooco shaqeynta iyo qaabeynta casriga ah. Qaabka ugu caansan waa Coldstore CS-12 hubinta nabadgelyada iyo raaxada shaqada ee leh amniga ugu sarreeya ee suurtogalka ah.
Dharka dabaasha ah oo hal -beeg ah ayaa leh karbaash milicsiga muuqaalka ugu fiican.
Moodelkani wuxuu leeyahay jiinyeerro lugaha iyo galoofyada badhkood ee mockups-ka. Dharka ayaa haya shahaadadaWaad ku mahadsan tahay taas oo loo isticmaali karo meelaha heerkulkoodu gaadho -40 darajo Celsius, kana ilaaliya taabashada iyo qabowga qabowga. Moodalka Coldstore CS-12 wuxuu ka kooban yahay dhar bannaanka loo maro oo neefsanaya oo leh waxyaabo wasakh iyo biyo celiya. Laga soo bilaabo taxanaha COLDSTROE, waxaan sidoo kale bixinnaa jaakadda COLDSTORE CS10 iyo surwaalka COLDSTORE CS11.
Guud ahaan ilaalinta qaboojiyaha ama qolalka qabow HI-GLO 40 ilaalin ilaa -83,3 ° C
Nooc xirfadeed loogu talagalay shirkadaha xirfadleyda ah
Moodooyinka aan bixinno waxay leeyihiin sharraxaad faahfaahsan. Intaa waxaa sii dheer, qaabka 'Hi-Glo 40', waxaan ku bixinay shahaado xaqiijineysa u hogaansanaanta heerka UNE-EN 342: 2004 / AC: 2008. Qaabka aan soo sheegnay wuxuu leeyahay 340 g oo ah kuleylka kuleylka, maaddada dibedda waa nylon, gudahana waxaa laga sameeyay polyester, halka qeybta kore ay ka kooban tahay 280 g oo ah dhogorta dhogorta. Macaamiisha ayaa hubin kara waxa alaabtu ka samaysan tahay, heer kulka loogu talagalay iyo culeyska alaabtu leedahay. Suudhadhka ayaa loo sameeyay si ay u isticmaali karaan dhowr sano oo aysan u hor istaagin dhaqdhaqaaqa goobta shaqada sida ugu macquulsan.
Haddii shaki ku jiro, fadlan la xiriir waaxdayada adeegga macaamiisha, kuwaas oo ku farxi doona inay kaa caawiyaan inaad doorato dharka saxda ah ee qaboojiyaha iyo bakhaarka qabow. Waxaan sidoo kale bixinnaa jaakado, surwaal, kabo, galoofyo.
qolka qabow guud ahaanku habboon heerkulka hooseeyaguud ahaan xilliga qaboobahailaalinta guud ilaa - 40 darajolabiska nabadgelyadadharka shaqadaqaboojiyaha guudDharka ColdstoreKu habboonaanta Hi-GloDharka qaboojiyahadukaan qabow dhigaydukaan qabow dhigaysuudka dukaanka qabowdharka dukaanka qabowsuud difaac